Iloli lomgwaqo i-XJCM 6X6 eligibele emgwaqweni lifakwe eTurkmenistan
Kulesi sigamu seminyaka edlule, Ngemizamo yabo bonke abasebenzi beXJCM, sesiqedile wonke amaloli akhwele amaloli omsebenzi wamandla eTurkmenistan. Lo mklamo omusha, umdlalo we-crane 6X6 Hongyan chassis .I-crane inamandla amakhulu. NgoJan, 24,2021, Sabamba i-sim ...Funda kabanzi »
Amayunithi angama-30 we-XJCM brand 25 ton truck crane izingxenye alungile
Amakhasimende angaphandle a-ode amayunithi angama-30 25 ton XJCM brand truck crane neHong Yan chassis ku-Auguest, 2020. Abasebenzi be-XJCM bamatasatasa futhi basebenza kanzima kulo myalelo .Manje zonke izingxenye sezimi ngomumo .Isitolo se-Assembly sizobe simatasa kusukela manje kuqhubeke. Hong Yan chassis white XJCM iloli crane cab & nb ...Funda kabanzi »
Uyemukelwa kuBauma CHINA 2020, inombolo yedokodo le-XJCM ingu-E2.349
I-Bauma CHINA, umbukiso wemishini yokwakha omkhulu kunayo yonke e-Asia, ukumema ukuthi uhlangane namandla okukhiqiza e-CHINA emhlabeni! 24 -27 Novemba 2020 XJCM izohlangana nawe eShanghai New International Expo Center, idokodo elingu-E2.349 Funda kabanzi »
Ukuphikelela okusha ithuba elisha isiqalo esisha
I-Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co, Ltd. (XJCM) yasungulwa ngo-2002. Inhlokodolobha yerejista ingu-46 Million RMB. Njengoba nomkhiqizi wokuqala futhi umholi ezimangelengele sezwe crane, senza yokukhiqiza nokuthuthukisa ezimangelengele sezwe crane, iloli crane, multifunction ipayipi laye ...Funda kabanzi »
Abakhiqizi be-crane yamaloli eXuzhou bakhuluma ngokutholakala kwe-drop jitter
Umshini weloli we-crane boom luffing mshini usetshenziselwa ukushintsha irediyasi esebenzayo, kuyadingeka ukuthwala i-amplitude eguquguqukayo, futhi isenzo sokuqhaqha sizinzile futhi sinokwethenjelwa, futhi imvamisa inesifunda se-hydraulic esifundeni sokuqedela. Lapho i-valve yokusebenza ...Funda kabanzi »
Ukuxazulula inkinga yomlenze weselula crane nokuqapha
Inkinga yokudubula izindlela zokuxazulula inkinga yombhoshongo weselula: enye ukufaka enye entsha; okwesibili ukulungisa nokulungisa. Ngaphezu kwalokho, amaphuzu alandelayo kufanele aqaphele ngesikhathi sokuqaqa nokulungisa inqubo. 1. Ngaphambi kokuhlanza, qala ngokuhlanza ingaphandle le ...Funda kabanzi »
Ikheli: NO.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China
Ucingo: + 86-516-85055801
Umakhala ekhukhwini: 86-18852120810